शीर्ष दलका शीर्ष नेता कहाँबाट निर्वाचन लड्ने तयारी गर्दैछन् ? - Everest Dainik - News from Nepal
शीर्ष दलका शीर्ष नेता कहाँबाट निर्वाचन लड्ने तयारी गर्दैछन् ?
सोलुखुम्बु, भदौ २७ ।
याे पनि पढ्नुस दललाई नगरपालिका र गाउँपालिकाको उम्मेदवार छान्न सकस
याे पनि पढ्नुस भीभीआईपीका रोगको उपचार अब नेपालमै
याे पनि पढ्नुस प्रचण्ड/ओली र महरा/देउवा नजिकिँदै किँन ?
माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले ललितपुर ३ बाट निर्वाचनमा उठ्ने तयारी गरेकी छन् । उनी यसअघि पनि ललितपुरबाटै निर्वाचन लड्दै आएकी छन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा भुसाल ललितपुर ३ बाट निर्वाचित भएकी थिइन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीमा आबद्ध थिइन् । वैद्य माओवादीले निर्वाचन बहिष्कार गरेकाले भुसाल निर्वाचन लड्न पाइनन् । -नयाँ पत्रिकाबाट